#Mourinho Ayaa Ku gacan sayray Dalab Uga Yimid Benfica isagoo Rajo ka Qaba mid ka mid ah kooxaha hogaaminaya Horyaalka Yurub | Get Latest News From Horn of Africa |
#Mourinho Ayaa Ku gacan sayray Dalab Uga Yimid Benfica isagoo Rajo ka Qaba mid ka mid ah kooxaha hogaaminaya Horyaalka Yurub
Tababarihii hore ee Manchester United Jose Mourinho ayaa diiday fursad uu dib ugu soo laaban lahaa kooxda Benfica, sida ay sheegayaan wararka.
Tababarihii hore ee Manchester United, Jose Mourinho ayaa go’aan ka gaadhay shaqadii ugu horreysay ee loosoo bandhigay tan iyo markii laga caydhiyey United bishii hore.
Kooxda kubadda cagta waddanka Portugal ee Benfica ayaa usoo bandhigtay Mourinho inuu noqdo tababaraheeda iyaga oo shaqada ka caydhiyey Rui Vitoria oo saddex sannadood iyo badh ahaa macallinkooda.
Tababaraha la eryey ee Vitoria ayaa waxa uu Benfica u qaaday horyaalka dalkaas laba jeer oo isku xigta, laakiin markii u dambaysay waxa ka faro-maroojisay FC Porto oo awood u sheegatay.
Ciyaartii ugu dambaysay ee Vitoria, waxa Benfica ay la kulantay guul-darro qadhaadh waxaana Arbacadii 2-0 ku garaacday Portimonense.
Sida uu qoray wargeyska Record, tababare Jose Mourinho ayaa iska diiday shaqada Benfica ay usoo bandhigtay, waxaanu u sheegay in aanu waqtigan diyaar u ahayn inuu tabaabrenimada kusoo laabto.
Inkasta oo mushaharka badan ee uu qaato uu culays ku noqon lahaa, haddana Benfica may jeclaysanin jawaabta uga timid Mourinho, waxaanay doonayeen inuu hoggaanka u qabto kooxdiisan aadka looga tixgeliyo.
Benfica ayaa ahayd kooxdii uu Mourinho kasoo bilaabay tababarenimada, waxaana 11 ciyaarood oo uu macallin u ahaa ay guuleysteen lix ka mid ah, ka hor intii aanay isku khilaafin heshiiskooda saddex bilood oo uu xilka hayey.
Si kastaba ha ahaatee, Jose Mourinho ayaa la filayaa inuu fasax ka galo shaqooyinka oo aanu si degdeg ah ugu soo laabanin.